Izindatshana zika-Elma Beganovich Martech Zone
Imibhalo nge U-Elma Beganovich
UNksz Beganovich uyahola I-A & EImizamo yokwakha uhlu lozakwethu namakhasimende adume umhlaba wonke. Indawo yakhe yobungoti ifaka phakathi ukukhomba izindima ezingadlalwa yi-A & E yezinhlobo ezahlukahlukene zezimboni ezimbonini ezahlukahlukene, kanye nokwenza imigomo nobubanzi balokho kubambisana.
Kungenzeka Kanjani ukungathandwa kwabathelisi esikubona kuthinta ukumaketha komthelela?
NgoLwesine, ngo-Okthoba 15, 2020 NgoMsombuluko, Januwari 18, 2021 U-Elma Beganovich
I-COVID-19 isishintshe indlela esithenga ngayo. Ngobhadane oludlangile ngaphandle, abathengi bakhetha ukuhlala bathenge izinto ku-inthanethi esikhundleni salokho. Kungakho abathengi bejikela kubathonya ngokuya ngokwengeziwe kwamavidiyo wokuthwebula kusuka kunoma yini kusuka ekuzameni ngezindebe zomlomo ukuya ekudlaleni imidlalo yethu esiyithandayo yevidiyo. Ukuthola okuningi ngomphumela wobhubhane ekuthengiseni okunamandla nasentengweni, bheka ucwaningo lwethu lwakamuva. Kepha kusebenza kanjani lezo zinto okufanele zibonwe